Tahiry andramena : hahodina eto an-toerana ? | NewsMada
Maromaro ny paikady hapetraky ny fanjakana mikasika ireo tahiry andramena. Ho sazina mafy ireo mpanao trafika sy ny mpiara-mitsikomba ary hahodina eto an-toerana ny andramena, hitondra tombontsoa ho an’ny firenena.
Andrasana ny fampiharana sy ny vokatra! Miandry ny didy avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny fankatoavan’ny Antenimierampirenena hananganana ny Fitsarana manokana mikasika ny andamena. Hitsara ny “Raharaha andramena”, rehetra ity fitsarana ity ary ao anatin’izany ny famaizana, arakaraka ny sokajin’ireo voaporofo fa meloka. Fampanaovana asa an-terivozona 10 taona farafahakeliny ny sazy, miampy lamandy 50 tapitrisa Ar hatramin’ny 500 tapitrisa Ar.
Misy koa ny fepetra sy ny lalàna ary paikady samihafa mifandraika amin’ny fitantanana ireo andramena. Eo am-pamitana azy ny fanisana sy fanasiana marika ny tahiry giazan’ny fanjakana sy ireo mbola angonina, tohanan’ny Banky iraisam-pirenena.
Mitohy ny fikasana hanondrana
Tsiahivina fa tsy afaka manondrana andramena any ivelany i Madagasikara satria tratry ny ankivy, raràn’ny Rafitra iraisam-pirenena mifehy ny varotra biby sy zavamaniry ahina ho lany tamingana (Cites). Handroso ny drafitrasany mikasika ny hanaovana ireo tahiry andramena ireo ny fanjakana amin’ity volana janoary ity. Ao anatin’izany ny hanaovana antso tolo-bidy iraisam-pirenena. Hahodina eto an-toerana ihany ny andramena, vao azo aondrana any ivelany. Hisy ampahany amin’ny vola azon’ny fanjakana homena ny faritra sy ny kaominina niavian’ny andramena, hoentina hampandrosoana ifotony.
Manamafy ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala ary ny ekolojia, fa tsy nisy hazo andramena vaovao notapahina intsony tamin’iny taona 2015 iny. Tsikaritra kosa anefa fa mbola misy foana ny fikasana hamoaka an-tsokosoko, raha tsy hiteny afa-tsy ilay kaontenera 12 tratra farany teo tany Toliara. Nambara fa hasy ny tao anatiny, nefa hazo voamboana sy andramena ny tena izy. Na tsy nisy aza ny fanazavana ny antony, nesorina tamin’ny toerany ny tale jeneralin’ny Ala tao amin’ny minisitera, ny herinandro lasa teo, nandritra ny filankevitry ny minisitra.
Tsy mbola mazava ireo bolabola 30.000 navotsotry ny fitsarana tany Singapour. Misy koa ny voarohirohy amin’ny “Raharaha andramena” ankehitriny. Maro sahady ny asa miandry ilay fitsarana manokana!